Xogta beddelashada ka Lugood in Android muuqato wax aan macquul aheyn dadka qaarkood, laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay in tani ay tahay lagama maarmaan. Iyada oo dad badan u wareegaayo ay diiradda ka macruufka in Android, waa lagama maarmaan si loo hubiyo in aad hesho app lagu kalsoonaan karo inay si fiican u kala iibsiga ee dhammaan xogta in aad aad telefoon jir. Fikrad fiican in arrintan la xiriira waa in la isticmaalo TunesGo, codsi abuuray by Wondershare la Ujeedada ugu weyn ee kuu oggolaadaan in aad si ay u maareeyaan, share xaalkiisa music aad rabto in aad via qalab lagu kalsoonaan karo.
Waxaad isticmaali kartaa sida qalab ku sugitaanka si loo soo wareejiyo aad music ka macruufka in qalab ama computer kale oo qaab aan muuqan oo aan isticmaalka Lugood. Sure, interface waa la mid ah laakiin TunesGo falaa Lugood marnaba sameeyey, iyo in uu yahay in ay bixiyaan dadka isticmaala ay gacanta buuxda waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay u baahan yihiin. Waa qalab xiiso leh, xirfad iyo mid gaar ah oo maamula in ay ka soo adduunka oo dhan la taleefannadooda Android xirmaan users Lugood.
Sidee si ay u gudbiyaan Lugood content in Android
Isticmaalka TunesGo Wondershare waa mid aad u fudud oo lagu kalsoonaan karo, oo ka Lugood aad loo xirxiro si ay Android wareejinta music waa mid aad u fudud, inaad sameyso oo dhan waa in la hubiyo in aad leedahay telefoonka iyo in Wondershare aad rakibo TunesGo waxaa si fiican u shaqeeya. Kaliya u hubso in aad raacdo tallaabooyinka fudud ee soo socda si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee suuragalka ah.
Ku rakib TunesGo Wondershare oo lagu xiro qalabka Android si aad u your computer.
Waxaad u baahan doontaa inaad guji badhanka Transfer Music in waxa uu ku yaalaa on page default guriga.
Waxaad u baahan doontaa in ay soo galaan this page mar qalab aad ku xiran si ay u hesho natiijooyinka aad u baahan tahay.
Marka lagu sameeyo, waxaad u leedahay in guji Import ka dibna dooro Import ka Lugood
Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan playlist in aad rabto in aad ku wareejin ka Lugood si aad u qalabka ku xiran. Dooro playlist ka dibna waxaad u baahan doontaa riix OK.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad hadda samayso waa in ay sugaan illaa habka la dhameystiro oo waxaad awoodi doontaa inaad si aad u hesho playlist Lugood qalabka adiga oo aan ka kaaftoomi kasta.
Bedelka ee kaabta Lugood in Android la MobileTrans
MobileTrans Waa codsi ah in aad siisaa awoodda xiriirada wareejinta, abuse wac, fariimaha, macluumaadka kaalandarka, photos, music, video iyo sidoo kale barnaamijyadooda u dhexeeya noocyo kala duwan oo telefoonada iyo your computer muuqan iyo natiijada degdeg ah.
Maxaa ka dhigay MobileTrans taagan yahay xaqiiqda ah in app tani waa halis oo lacag la'aan ah iyo hanaanka wareejinta waxaa loo sameeyaa si ammaan ah si aad u heli karaa 100% habboonaan iyo natiijada xirfadeed ee jeer oo dhan. MobileTrans Muuqan la shaqeeya dhammaan noocyada telefoonada, si la isticmaalayo waa waayo-aragnimo weyn in la sheego ugu yaraan ah!
Wondershare MobileTrans Waa codsi ah oo khibrad leh oo uu soo qorsheeyay iyada oo ujeedada ugu weyn ee aad siin doono natiijada xiddig ee jeer oo dhan. Waxay awood u aad si ay u gudbiyaan xogta iyo telefoonka hayaan muuqan u dhexeeya barnaamijyadooda iyo qalabka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa app si uu u soo celiyo taleefanka kaga imaanayo Saved a.
Fikradda ugu weyn waa in aad u baahan tahay si ay u abuuraan gurmad ah ee aad qalab macruufka ah ay u xidhiidhinaya Lugood, ka dibna si deg deg ah MobileTrans Korka doonaa hayaan hadda jira ee la heli karo waxaa si aad u soo celin kartaa qalabka adiga oo aan wax dhibaato ah.
Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan Soo Celinta doorasho ka dibna dooro gurmad aad rabto. The bilaabo nuqul ah oo sug ilaa habka la dhammeeyo, in ay tahay, ma jiraan talaabooyin badan si loo soo dhex noqdo.
All oo dhan, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan habab badan oo aad isticmaali karto si ay u gudbiyaan xogta Lugood in Android leh xirfad iyo natiijada lama ilaawaan ah. Ha welwelin haddii aadan ma waxaad ka heli kartaa xal si ay u qabtaan kala iibsiga noocan oo kale ah, sababta oo ah wakhtiga ay tani waxaa laga heli karaa midigta idinka soo hor jeedda, si aad u xidhan in jeclaan natiijada mar walba. Labada of Chine waxay bixiyaan natiijada xirfadeed, oo aan kugu dhiirinaynaa in aad iska hubi in si loo fuliyo suuqa aad u baahan tahay ka Lugood in Android!
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Lugood in Android